theZOMI: Burma News International - April 23, 2013
Burma News International - April 23, 2013
Stop rapes: Shan women demand
A rights group, Shan Women’s Action Network (SWAN) demands to end the ongoing conflicts between Shan State Progress Party/Shan State Army (SSPP/SSA); and Burma army withdraw all units reinforced during the conflicts in March as committing atrocities, abuses and rapes against women and children continue.
The BBC on Sunday ranareport accompanied byavideo—much of which they say was acquired from police in Meiktila—that shows the brutal killing of at least two people at the hands ofavicious mob which included Buddhist monks.
Fort Wayne expects fewer Myanmar refugees
Fewer refugees from Myanmar will be resettled in Fort Wayne, Indiana, in the future,aUS State Department official said last week, according toareport in the local Journal Gazette.
Yangon Port to host 14 new jetties
Myanma Port Authority announced on Monday that it will build 14 more jetties at Yangon Port in addition to the 18 existing ones,amove that will effectively double freight handling, the state-run New Light of Myanmar reported on Monday.
Indonesian President to visit Myanmar
Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono will visit Myanmar on April 23, according to presidential staffers in Jakarta.
An Irish veteran of several foreign adventures said that he will travel 10,000 kilometers by bicycle from Ireland to Myanmar for charity, part of which will go to the Karen Refugee Committee Education Entity (KRCEE) based in Mae Sot at the Thai-Myanmar border.
About 500 villagers on Madae Island in Kyauk Pru Township staged on Thursdayademonstration against Chinese company CNPC by marching on the streets of Island, said activists.
ပြည်တွင်း ပြည်ပ တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့များ ရန်ကုန်မှာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး
ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပြည်ပအခြေစိုက် တိုင်းရင်းသား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး အလုပ်အဖွဲ့ (WGEC) မှ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ပြည်တွင်း တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီများမှ ခေါင်းဆောင် များ ဧပြီလ ၂၁ ရက်နှင့် ၂၂ ရက်နေ့များတွင် ရန်ကုန်မြို့၌ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး လျက် ရှိကြသည်။
RCSS/SSA ထိမ်းချုပ်နယ်မြေအသွားလမ်း ဂိတ်တခု ထိုင်းအစိုးရပိတ်ထား
သျှမ်းပြည်တပ်မတော်တောင်ပိုင်းတပ်ဖွဲ့ဟု လူသိများသည့် RCSS/SSA ထိမ်းချုပ်နယ်မြေသို့ ဖြတ်ကျော် ရသည့် ထိုင်းဂိတ်တခုအား ထိုင်းအစိုးရက ပြီးခဲ့သည့်ရက်ပိုင်းက ပိတ်ပင်လိုက်ကြောင်း ကြားသိရပါသည်။
အမှတ် ၁၄ စစ်လေ့ကျင့်ရေးကျောင်း ရုတ်သိမ်းဖို့လူထုဆန္ဒ ဖော်ထုတ်ပွဲပြုလုပ်
ကယား(ကရင်နီ) ပြည်နယ် ဖရူဆိုနယ်အတွင်းရှိ အမှတ် ၁၄ စစ်လေ့ကျင့်ရေးကျောင်း ပြန်လည်ရုတ် သိမ်းရေးနှင့် မြေယာများပြန်လည်ရရှိရေး အတွက် လူထုန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲနှင့် တွေ့ဆုံပွဲကိုမာခရောရှေ့ ကျေးရွာမှာ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။
ကျပ်နှစ်သိန်းဖြင့် ရောင်းချခဲ့သော CDMA 800 MHz မိုဘိုင်း ဆင်းကဒ်များကို ကျပ် ၁,၅၀၀ ဖြင့် ဝယ်ယူခွင့် ရရန် ကချင်ပြည်နယ်၊ မြစ်ကြီးနားမြို့တွင် တနင်္လာနေ့မှ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့အထိ လျှောက်လွှာများ စတင်ဖြည့် သွင်းနေပြီ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
သမီးဖြစ်သူ သေဆုံးမှုကို တိုင်ကြားသဖြင့် ဖခင်ဖြစ်သူ တရားရင်ဆိုင်နေရ
သမီးဖြစ်သူ သေဆုံးမှုအား စုံစမ်းစစ်ဆေး ပေးရန် တိုင်ကြားမှု အပေါ် စစ်ဗျူဟာမှူးက မမှန်မကန် လိမ်လည် ရေးသား စွပ်စွဲသည်ဟု ဆိုကာ ပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၁၁ ဖြင့် ပြန်လည်တရားစွဲ ခဲ့ရာ ရှေ့နေဌားခွင့်ပြုရန် တရားစွဲခံရသူ ဦးဘရန်ရှောင်က ယနေ့ရုံးချိန်းတွင် လျှောက်ထားခဲ့သည်။
အစိုးရတပ်ဖွဲ့များ SSPP/SSA အားဆက်လက်တိုက်ခိုက်နေ
အစိုးရတပ်များသည် ရှမ်းပြည် မြောက်ပိုင်း တန့်ယန်းမြို့နယ် လွယ်လန်း၊ လွယ်စေး တောင်တဝိုက်၌ လှုပ်ရှားနေသော ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ (SSPP/SSA) အား ယမာန်နေ့ အထိ တိုက်ခိုက်လျက် ရှိနေကြောင်း SSPP ၏ နိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေးတာဝန်ခံ ဗိုလ်မှုးကြီးဖိန်ဖ က ဆိုပါသည်။
မယ်ရာမိုနှင့် မယ်လအူး ဒုက္ခသည် များ ဂျပန်နိုင်ငံ ခိုလှုံခွင့်လျှောက်နိုင် ပြီ
ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် မဲဟောင်ဆောင်ခရိုင်အတွင်းရှိ မယ်ရာမိုနှင့် မယ်လအူးဒုက္ခသည်စခန်းတို့တွင် ဂျပန်နိုင်ငံသို့ သွားရောက် အခြေချလိုသူများ ရှိပါက ကုလသမဂ္ဂ ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီးရုံး-UNHCR က ဒုက္ခသည်အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုထား သည့် လက်မှတ်ရှိထားသူ မည်သူမဆို လျှောက်ခွင့်ပြု လိုက်ပြီဟု သိရသည်။